Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Septambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Septambra, 2009
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Septambra, 2009
Tontolo: Mandefa ny lahatenin'i Gaddafi teo anatrehan'ny Firenena Mikambana amin'ny alalan'ny Tweet
Amerika Avaratra 30 Septambra 2009
Tamin’ny fanambarany voalohany nanoloana ny fivoriamben’ny Firenena mikambana, ny Filoha Libyanina Muammar Gaddafi dia nanenjika ny fotoana veriny. Ny fandraisany fitenenana dia in’enina amin’ny fotoana nomena hitenenana, nefa ireo mpitondra eran-tany tonga tao nihomehy sy nanoaka fotsiny. Any anaty Twitter, be ny fanehoan-kevitra navoakan'ireo mpampiasa izany momba ilay kabary.
Fifaninanana Horonan-tsary: Solontenan'ny Mponina amin'ny andron'ny faha-64 taonan'ny Firenena Mikambana
Manazava ny mpilalao sarimihetsika George Clooney ny fomba ahafahanao mandray anjara sy hahatafidiranao ho isan'ny 5 mpandresy izay mety ho tsara vintana handray anjara amin'ny andron'ny faha 64 taonan'ny Firenena Mikambana any amin'ny Foiben'ny Firenena Mikambana any amin'ny tanànan'i new York.
Afovoany Atsinanana: Ny fivoaran'ny Mofomamy kely Cupcake
Bahrain 29 Septambra 2009
Tratry ny rivo-maherin'ny fiovana ny mofomamy kely cupcakes any amin'ny faritra Afovoany Atsinana ary mitrandraka ny fandrosoan'izany ireo mpampiasa bilaogy mpankafy ny mamy. Mitantara i Jillian C. York avy any an-tsisin-tany.
Andron'ny boky eran-tany: ny fiainan'ny vehivavy ao anatin'ny fitaratry ny lehilahiny
Amerika Avaratra 28 Septambra 2009
Ny vehivavy ihany ve no mandoko ny fiainany miaraka na tsia amin'ny fiainana izay omen'ny lehilahiny azy mandritry ny taona ? Manome sary lehibe antsika ireto fitsangatsangana ara-literatiora ireto ary mitondra antsika ho an'ny Quebec, mankany France ary farany any amin'ny mpanoratra mahaliana alzeriana.
Hetsiky ny mpitoraka blaogy Omani hiadiana amin'ny gripam-borona
Oman 25 Septambra 2009
Mifanome tànana ireo mpitoraka blaogy Omani mba hanentana sy hiaro ny mponina amin'ny loza ateraky ny gripa. Hatramin'izao, olona 16 no maty noho ity aretina ity any Sultanat, ny avo indrindra miohatra amin'ireo mifanakaiky aminy.
Iran: Hetsi-panoherana an'i Ahmadinejad any New York
Iràna 24 Septambra 2009
Miandry ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad izay nandeha nankany New York, hanatrika ny fivoriam-ben'ny Firenena Mikambana ny hetsi-panoherana ny governemanta Iraniana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mitranga any Iran. Manentana ny olona handray anjara amin'ity fihetsiketseham-panoherana ity ny fampitam-baovaon'olo-tsotra. Mandra-piandry aloha dia nofoanan'ny New York Helmsley Hotel ny lanonana saiky...
Iran: Kisarisary ahetsika manohitra jadona
Maro ny haiendrika, afisy, hira sy lahatsarin-kira noforonin'ny Iraniana sy tsy Iraniana manerantany ho entiny manohana ny hetsi-panoherana “maitso” manohitra ny valim-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny 12 jona. Nihantsy ady amin'ny fitondrana jadona any Iran koa ankehitriny ny mpahay kisarisary ahetsika. Avy amin'ny aingam-panahin'i Gandhi izany olona maitso izany Mahmoud Ahmadinejad nandritra...
Ejipta 22 Septambra 2009
Nifanojo ny fandraisana an-tànana nataon”i Sharek sy ny an'i Gamal Murbak, nanapaka hevitra ny hanao ny fampielezan-kevitra amin'ny fombany manokana [AR] ho an'i Gamal Murbak ity mpihira Egyptiana iray Mohsen El Sayad Gamal Mubarak . Leih Maye7komshi (Maninona izy no tsy natao hitondra?) no lohatenin'ny hira ary Wa7da Masreya manoritra...
Iran: Lahatsarin'ny fihetsiketseham-panoherana nandritra ny andron'i Quds
Iràna 19 Septambra 2009
Nitafy maitso ny mpanao fihetsiketsehana Iraniana ny 18 Septambra teo ho fanohanany ny mpanohitra, izay mbola nihantsy ny fitondrana Iraniana indray teny an'araben'i Teheran, Shiraz, Isfahan, ary tanàna maro hafa hanoheran'izy ireo ny jadona. Ataon'ny Repoblika Islamika amin'ny fomba ofisialy ho Andron'i Quds ( andro atokana ho fanohanana ny Palestiniana...
Iran: Miomana hihetsika mafimafy kokoa amin'ny andron'ny Quds
Iràna 17 Septambra 2009
Mbola mihaika ny fitondrana islamika amin'ny fomba maro samihafa ihany ny hetsi-panoherana ao Iran, hatramin'ny fiantsoana ‘Allaho Akbar’ (Lehibe Andriamanitra) hatreny an-tampon-trano amin'ny alina (fifampiarahabana hatramin'ny fotoanan'ny fanoherana) mandra-pahatongan'ny fihetsiketsehana amin'ny Andron'i Quds (Jerosalema). Ny andron'i Quds, voambolana Arabo milaza an'i Jerosalema — dia hotontosaina ny 18 septambra amin'ity taona...